football – Gaming Noodle
လူကိုယ်တိုင် ကန်နေရသလို ခံစားမှုပေးနိုင်မယ့် ဘောလုံးမိုဘိုင်းလ်ဂိမ်း – Score! Hero(2)
လူကိုယ်တိုင် ကန်နေရသလို ခံစားမှုပေးနိုင်မယ့် ဘောလုံးမိုဘိုင်းလ်ဂိမ်း – Score! Hero(2) အင်တာနက်ကို လူတိုင်းအလွယ်တကူ မရရှိနိုင်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုမှာ Offline လည်း ကစားလို့ရ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ အနှစ်သက်ဆုံးအားကစား ဖြစ်တဲ့ ဘောလုံးနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ ဖုန်းဂိမ်းလေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ နာမည်ကတော့ Score Hero2လို့ခေါ်ပါတယ်။ UK အခြေစိုက် First Touch Game ဆိုတဲ့ ကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အရှေ့က Score Hero ဂိမ်းကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်က ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး လူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။ အခု Score Hero2ကတော့ ဗားရှင်းအသစ်ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၁ ဧပြီလထဲမှာ ထွက်ရှိခဲ့တာပါ။ ဒီဂိမ်းရဲ့ အကြိုက်ဆုံးအချက်ကတော့ လူကိုယ်တိုင် …
လူကိုယ်တိုင် ကန်နေရသလို ခံစားမှုပေးနိုင်မယ့် ဘောလုံးမိုဘိုင်းလ်ဂိမ်း – Score! Hero(2) Read More »
စျေးနှုန်းသက်သာပြီး Season Update သာပါရှိမယ့် PES 2021
[Unicode] စျေးနှုန်းသက်သာပြီး Season Update သာပါရှိမယ့် PES 2021 ဘောလုံးဂိမ်းချစ်သူပရိသတ်များ စောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတဲ့ PES 2021 ဟာ ယခင်နှစ်များအတိုင်း သီးခြားဂိမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ ထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပေမယ့် ချိုသာတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်း KONAMI က ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် PES 2021 ဟာ season update ငယ်တစ်ခုအဖြစ်သာ ထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်လို့ ဈေးနှုန်းချိုသာစွာရောင်းချပေးရခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း KONAMI က ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ PES 2021 မှာ ဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုတွေပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုတော့ အတိအကျထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် season update လို့ ကြေညာထားပုံအရတော့ လက်ရှိ PES 2020 အတွင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ အသင်းသားစာရင်းများနဲ့ အချက်အလက်များကိုသာ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲပြီး ဂိမ်းသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ ထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ကြောင်း ယူဆရပါတယ်။ …
စျေးနှုန်းသက်သာပြီး Season Update သာပါရှိမယ့် PES 2021 Read More »
[Unicode] ပရီးမီးယားလိဂ်က ဘောလုံးသမားတွေကိုယ်တိုင် ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ePremier League Invitational FIFA 20 ပြိုင်ပွဲ Covid-19 ရောဂါကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက် ရပ်နားထားရတဲ့ အားကစားပွဲများထဲမှာ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်များလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ပါ။ ဒါကြောင့် ယင်းပြိုင်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ကစားနေခဲ့ကြတဲ့ နာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားများဟာလည်း ယခုလိုအိမ်တွင်းအောင်းနေရချိန်များမှာ ဗီဒီယိုဂိမ်းများကို ကစားလာကြပါတယ်။ ယခုအချိန်မှာတော့ ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်း ၂၀ လုံးက ကိုယ်စားပြုကစားသမားများ ပါဝင်မယ့် FIFA 20 ပြိုင်ပွဲ ePremier League Invitational ကို ကျင်းပမှာဖြစ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ယင်းပြိုင်ပွဲရဲ့ အုပ်စုပတ်လည်ပွဲစဉ်များကို ဧပြီလ ၂၁ ရက်နေ့က စတင်ကာ ဧပြီလ ၂၃ ရက်နေ့အထိ ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြမှာဖြစ်ပြီး ကွာတားဖိုင်နယ်၊ ဆီမီးဖိုင်နယ်နဲ့ ဂရင်းဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်များကိုတော့ ဧပြီလ ၂၄ …
ပရီးမီးယားလိဂ်က ဘောလုံးသမားတွေကိုယ်တိုင် ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ePremier League Invitational FIFA 20 ပြိုင်ပွဲ Read More »
Esports အသင်း ထူထောင်မယ့် အီတလီလက်ရွေးစင် ဘောလုံးသမား
[Unicode] Esports အသင်း ထူထောင်မယ့် အီတလီလက်ရွေးစင် ဘောလုံးသမား အီတလီလက်ရွေးစင် ဘောလုံးသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Alessio Romagnoli ဟာ Pro2Be Esports နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး esports အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုကို စတင်ထူထောင်လိုက်ပါတယ်။ Team Romagnoli လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို Pro2Be Esports က အလုံးစုံထိန်းချုပ်စီစဉ်သွားမှာဖြစ်ပြီး အသင်းရဲ့ official esports partner အဖြစ်လည်း ပူးပေါင်းတာဝန်ယူသွားမှာပါ။ Team Romagnoli ဟာ FIFA ကို အဓိကဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် အသင်းဖြစ်ပြီး အီတလီနိုင်ငံသား pro ကစားသမားများရော နိုင်ငံတကာ pro ကစားသမားများပါ ပါဝင်လာမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကြေညာချက်များအရတော့ Team Romagnoli ဟာ Cosimo …
Esports အသင်း ထူထောင်မယ့် အီတလီလက်ရွေးစင် ဘောလုံးသမား Read More »
ကိုယ်ပိုင် Esports အသင်းတည်ထောင်တော့မယ့် ရော်နယ်ဒင်ဟို
[Unicode] ကိုယ်ပိုင် Esports အသင်းတည်ထောင်တော့မယ့် ရော်နယ်ဒင်ဟို ကမ္ဘာကျော် ဘရာဇီးဘောလုံးကစားသမားဟောင်း ရော်နယ်ဒင်ဟိုဟာ ဂိမ်း controller များကို ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Scuf Gaming နဲ့ ပူးပေါင်းမှုများပြုလုပ်မှာဖြစ်ကြောင်း မကြာသေးမီက ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ပူးပေါင်းမှုရဲ့ ရလဒ်အနေနဲ့ ရော်နယ်ဒင်ဟိုဟာ ယင်းအမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ brand ambassador အဖြစ် အဓိကတာဝန်ယူရမှာပါ။ ရော်နယ်ဒင်ဟိုဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ထဲက esports လောကနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ကိစ္စရပ်များမှာ ပါဝင်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီး eLigaSul လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ Pro Evolution Soccer league ကို စတင်တာဝန်ယူပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၈ အောက်တိုဘာလက စလို့ eLigaSul ပွဲစဉ်ရဲ့ ပြိုင်ပွဲများကို နိုင်ငံပေါင်း ၂၆ ခုမှာ ကျင်းပပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ရော်နယ်ဒင်ဟိုဟာ …
ကိုယ်ပိုင် Esports အသင်းတည်ထောင်တော့မယ့် ရော်နယ်ဒင်ဟို Read More »
မန်စီးတီးအသင်းနဲ့ FaZe Clan တို့ အကျိုးတူပူးပေါင်းမှုများ ပြုလုပ်
[Unicode] မန်စီးတီးအသင်းနဲ့ FaZe Clan တို့ အကျိုးတူပူးပေါင်းမှုများ ပြုလုပ် မြောက်အမေရိကအင်အားကြီး esports အဖွဲ့အစည်း FaZe Clan နဲ့ ပရီမီယားလိဂ်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ မန်ချက်စတာစီးတီး (မန်စီးတီး) အသင်းတို့ဟာ အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်မယ်လို့ မကြာသေးမီက ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ဒီလို ပူးပေါင်းမှုဆောင်ရွက်မှုဟာ အသင်းနှစ်သင်းလုံးရဲ့ ပရိသတ်များအတွက် အတွေ့အကြုံသစ်များကို ပေးစွမ်းမှာဖြစ်သလို အတူတကွစည်းလုံးညီညွှတ်မှုများလည်း ဖြစ်ပေါ်လာစေမယ်လို့ ကြေညာချက်ထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ မန်စီးတီးဘောလုံးကစားသမားများဟာ အောက်တိုဘာလ ၆ ရက်နေ့မှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားမယ့်ပွဲက စ လို့ FaZe Clan တံဆိပ်ရော မန်စီးတီးတံဆိပ်ပါ ရိုက်နှိပ်ထားတဲ့ ဂျက်ကတ်အကျီ ၤများကို ဝတ်ဆင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းသို့ ပြုလုပ်ခြင်းဟာ အကျိုးတူပူးပေါင်းမှုရဲ့ ပထမဆုံး ရလဒ်ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ အရေအတွက်ကန့်သတ်ထားတဲ့ …
မန်စီးတီးအသင်းနဲ့ FaZe Clan တို့ အကျိုးတူပူးပေါင်းမှုများ ပြုလုပ် Read More »